Ganacsiyada Yaryar iyo kuwa aan macaash doonka ahayn ayaa lagu booriyay inay soo xareeyaan gargaarka COVID kahor Maalinta Shaqaalaha - Amjambo Africa
Ganacsiyada Yaryar iyo kuwa aan macaash doonka ahayn ayaa lagu booriyay inay soo xareeyaan gargaarka COVID kahor Maalinta Shaqaalaha
Waqtiga kama dambaysta ah ee lagu codsanayo $ 200 milyan ee barnaamijka Dib-u-soo-celinta Dhaqaalaha ayaa loogu talagalay in lagu yareeyo dhibaatada cudurka faafa ee COVID-19 ee ganacsiyada yaryar ee Maine iyo kuwa aan macaash doonka ahaynba way soo dhowaanayaan.
Sebtember 9 markay tahay 11 59 fiidnimo ayaa ugu dambayntii la caddeeyay, wuxuu sharraxay Josh Kochis, oo ah Agaasimaha Ka-qaybgalka Bulshada ee Goleyaasha Weyn ee Portland (GPCOG), oo ka mid ah toddobada urur goboleed ee barnaamijka maamula.
Codsiyada la helo ka dib waqtiga kama dambaysta ah lama tixgelin doono. Kochis wuxuu ku booriyay kuwa qorsheynaya inay codsadaan inay codsadaan ugu dambeyn Isniinta, Sebtember 7, si loo hubiyo inay jirto waqti wixii khaladaad ah la saxo ka hor waqtiga kama dambaysta ah. Wuxuu xusay in qaar ka mid ah codsiyada la helay ilaa maanta ay u baahdeen in lagu celiyo sixitaanka, iyo sababta oo ah codsiyada waxaa loo dhoofiyaa oo kaliya in la dhaliyo isbuucii laba jeer, codsiyada la helo ka dib Maalinta Shaqaalaha oo u baahan in la saxo waxay u badan tahay in la diido.
U-qalmitaanka ugu dambeeya ee barnaamijka waxaa go’aamiya gobolka, ka dib markii dhibcaha ugu horreeya laga helo Degmo Horumarinta Dhaqaalaha. Deeqaha waxaa loo qaybin doonaa ganacsiyada u qalma iyo ururada aan macaash doonka ahayn oo muujiya dakhliyada lumay ama kharashaadka ka dhashay cudurka faafa ee COVID-19
Isha laga helayo deeqda ayaa ah maalgelinta gargaarka ee federaalka ee CARES. Marka la xaqiijiyo u-qalmitaanka, gobolku wuxuu codsan doonaa algorithm si loo go’aamiyo inta lacag ee deeq-bixiye kasta heli doono, jeegna waa la jari doonaa oo boosta loo soo diri doonaa.
Laga bilaabo waqtiga saxaafadda, codsiyada iyo agabyada kale ee la xiriira barnaamijka waxaa lagu heli karaa oo keliya Ingiriisiga. Khad toosan ayaa loo heli karaa codsadayaasha u baahan caawimaad. Ilaa hadda, waqtiga sug khadka taleefanka ayaa aad u gaabnaa ama aan jirin. Cinwaanka emaylka ee ballan qaadaya caawimaadda, si kastaba ha ahaatee, wuxuu dib u soo dirayaa farriinta Waxaan la kulannaa mug weyn oo xiriir ah, markaa fadlan u oggolow ilaa saddex maalmood oo shaqo ah jawaab.
Codsadeyaasha su’aalaha qaba ama raba inay jadwal u sameeyaan ballanta caawimaadda waxay la xiriiri karaan Xarunta Soo-dhaweynta Muhaajiriinta ee Greater Portland ee [email protected] ama farriin uga tag 207-517-3401. Marcel Ntagora ayaa diyaar u ah inuu ka caawiyo soo galootiga iyo ganacsiyada ay leeyihiin qaxootiga qaab loo maro arjiga. Ma buuxin karo araajida dadka, laakiin wuxuu bixin karaa turjubaan, wuxuuna ka caawin karaa ka jawaabida su’aalaha nidaamka. Mr. Ntagora wuxuu ku hadlaa shan luqadood.
Ujeeddada wareegan ee maalgelinta CARES Act waa in la gaaro ganacsiyada yaryar ee Maine iyo kuwa aan macaash doonka ahayn oo muujiya baahida loo qabo gargaar dhaqaale sababtoo ah dakhligii lumay ama kharashyadii la xiriiray COVID-19. Deeqaha ma beddeli doonaan dhammaan dakhliga lumay, laakiin waxaa loogu talagalay in lagu caawiyo ganacsiyada iyo kuwa aan macaash doonka ahayn inay ku sii socdaan.
Khadka tooska ah 1-800-872-3838 oo taabo 3
Email caawinaad [email protected]
Website-ka https //www.maine.gov/decd/economic-recovery-grants
PreviousWaxbarashada caruurtu waa maalgashiga ugu muhiimsan ee aan samayn karno
NextWararka ka imanaya Afrika hero hero Geesiga Soomaaliyeed Dr. Xaawo Cabdi waxaa lagu xasuustaa inay ahayd codkii kuwa aan codka lahayn